#4 I-Chalet kaBud eMargaree, eNova Scotia - I-Airbnb
#4 I-Chalet kaBud eMargaree, eNova Scotia
Margaree Valley, Nova Scotia, i-Canada
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Kody
U-Kody Ungumbungazi ovelele
Umalume uBud uchithe izinsuku zakhe zobusha esebenza emahlathini aseMargaree, futhi izinsuku zakhe ezindala ejabulisa izakhamuzi zakhona. Le chalet yabantu abangu-2 ebizwa ngaye ilungele ukubaleka kwezithandani! Ibekwe phakathi kwezinkuni eziqinile, inebhavu yejethi yabantu ababili, engaphansi kwendawo yomlilo kagesi engamamitha ayi-6.
Ikhishi ne-King Bed
Ikhishi negumbi lokudlela e-Bud's Chalet lifaka isiqandisi, uhla lwezishisi ezine, izinto ezibalulekile zokupheka, umenzi wekhofi, i-microwave nomshini wokuwasha izitsha. Indawo yokudlela ihlanganisa netafula lababili, indawo yomlilo kagesi, i-satellite SMART TV kanye ne-Wifi yamahhala.
I-Chalet 4 iza ne-tub yayo eyi-6 jet whirlpool.
Njengoba kungekho omakhelwane abaseduze, i-chalet yethu izungezwe ihlathi nomhlaba wepulazi futhi ingaba indawo ekahle yokuphumula, nokukhululeka ngenkathi ubheke iSigodi esingezansi. Ibhalansi ephelele yokuba nazo zonke izinsiza zasekhaya, kanye nethuba lokujabulela isikhathi esithile sokuthula. Akunandaba, kumahektha ayi-14, kunendawo eningi yokwelula imilenze yakho!
4.97 · 192 okushiwo abanye
Cishe amakhilomitha angu-6 ukusuka eCabot Trail, le ndawo iyisisekelo esikahle sohambo lwakho lokuzungeza i-Trail, noma eduze neWestern and Central Cape Breton. Ukuba seduze kwethu ne-Inverness, Baddeck, Cheticamp kanye ne-Ingonish kwenza uhambo losuku ukusuka kulesi sisekelo lube lula.
Ababungazi bazotholakala ngocingo/ngombhalo/nge-imeyili noma ngomlayezo we-Airbnb ngesikhathi uhlala nathi. Uma kuphakama inkinga, ilungu leqembu lizoba sesayithini ukuze lixazulule inkinga ngokushesha okukhulu.
UKody Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Margaree Valley namaphethelo